Xaaladda Magaalada Boosaaso oo Maanta kacsan iyo Ganacsigii oo xiran – Gedo Times
Xaaladda Magaalada Boosaaso oo Maanta kacsan iyo Ganacsigii oo xiran
29th November 2017 admin Somali News, Wararka Maanta 0
Waxaa xiran in badan oo kamid ah ganacsiga magaalada Bosaaaso, shirkadaha waaweyn ayaa albabada u xirey xarumahoodi ganacsiga, sidaas si lamid ah waxaa sameeyey ganacsatada yaryar ee Suuqa weyn ee Boosaaso. Albaabada meheradaha ganacsiga waxaa horfadhiya shaqaalihii iyo mulkiilayaashii ganacsiga, markii la weydiiyo sababta ay ganacsiga u xireen ayey sheegayaan in ay tahay muranka ka taagan dekadda Bosaso darteed, iyo iyaga oo ka cabsi qaba in mudaaharaado dhacaan kuwaas oo sababi kara in ay soo dhex galaan kuwo boob iyo dhac raadineysa.
Doonyihii iyo maraakiibtii ku xirnaa dekadda Bosaso ayaa ka shiraacdey halkaas waxaana ay baroosinka dhigteen meel aan ka fogeyn dekadda. Kiraalayaasha Doonyaha iyo qaar kamid ah ganacsatadu waxay diidan yihiin lacagta khidmadda dekadda ee la kordhiyey iyo weliba canshuurta sida ay sheegayaan, maamulka ayaa ku doodaya in dekadda Bosaso ay tahay midda ugu khidmadda yar marka loo eego dekadaha kale ee dalka ka jira.
AKHRISO: Magacyadda Golaha Wasiiradda Hirshabeelle
Muqtaar Roobow oo Magaalada xudur u tagay sidii uu uga qayb qadan lahaa Dagaalka Al-shaabab”Sawiro”